Thwebula Battle.net 1.11.4.2368 – Vessoft
Battle.net – a isofthiwe yakhelwe ukugijima imidlalo kusuka isiphepho esikhulu seqhwa Entertainment. Isofthiwe ikuvumela ukudlala ezifana imidlalo ezithandwayo njengoba World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone njll Battle.net kwenza ukuhlangabezana kule lengxoxo, ukusungula isimo kwenethiwekhi, ukucinga kubasebenzisi bese wengeza nabangane ohlwini. Isofthiwe iqukethe esitolo eyakhelwe-kulelo kwenza ukuthenga imidlalo bese ulanda ezenezelwe ahlukahlukene kubo. Futhi Battle.net umemezela version kufinyeleleke of the game futhi iqukethe amathuluzi for update othomathikhi.
Balekani umdlalo kusuka isiphepho esikhulu seqhwa Entertainment
Communication in the lengxoxo
Ikhono ubuyekeze ngokuzenzakalelayo
Amazwana on Battle.net:
Battle.net Ahlobene software:
English, Русский, فارسی, Magyar... Speccy 1.29.714
Development Testing Ithuluzi ukuklama futhi ulungiselele zobuchwepheshe. Isofthiwe ikuvumela ukwakha wesifunda e umhleli graphic futhi ukuqhuba ukuhlolwa.